यस्तो हस्त रेखा हुने व्यक्ति हुन्छन् निकै धनी, तपाईँको पनि छ की ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यस्तो हस्त रेखा हुने व्यक्ति हुन्छन् निकै धनी, तपाईँको पनि छ की ?
जौको चिन्हः जुन ब्यक्तिको हातमा जौ जस्तो चिन्ह हुन्छ त्यस्ता ब्यक्ति निक्कै धनी र सुखी हुने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ। त्यस्तो चिन्ह हुने मानिस धनी र बैभवशाली मात्र होइन भाग्यमानी पनि हुन्छन्। उनीहरुको समाजमा मान प्रतिष्ठा पनि उत्तिकै हुन्छ।शंखको चिन्हः कुनैपनि व्यक्तिको हातमा शंखको चिन्ह हुनु पनि औधी राम्रो मानिन्छ । त्यस्ता ब्यक्ति बुद्धीमानी हुने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ । जुन व्यक्तिको पाँच वटा औंलामा शंखको चिन्ह छ भने त्यस्ता व्यक्ति विदेश भ्रमणमा गई नै रहन्छन्। समुन्द्र शास्त्रमा बताइए अनुसार त्यस्ता व्यक्तिले विदेशमा धन आर्जन पनि राम्रो सँग गर्न सक्छन्।
चक्रको चिन्हः जुन व्यक्तिको १० वटै औंलामा चक्र छ भने त्यसता ब्यक्ति संसार जित्ने ब्यक्ति हुने समुन्द्र शास्त्रमा दाबी गरिएको छ। यति एउटा मात्र औंलामा चक्र छ भने चाहिं त्यस्ता व्यक्ति विद्वान हुन्छन्। कुनै व्यक्तिको दुइवटा औंलामा चक्र छ भने त्यस्तो व्यक्ति निकै नै सुन्दर हुने मानिन्छ।सूर्य पर्वतः कुनैपनि व्यक्तिको हातको औंलाको फेदमा सूर्य पर्वत हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्ति राजनीतिक र सरकारी उच्च क्षेत्रमा पुग्छन्।